SERIE A: Kooxda Roma oo soo degtay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib markii ay garaacday Cagliari… + SAWIRRO – Gool FM
SERIE A: Kooxda Roma oo soo degtay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib markii ay garaacday Cagliari… + SAWIRRO
Haaruun January 22, 2017
(Rome) 23 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Roma ayaa soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Serie A, kaddib markii ay garaacday naadiga Cagliari oo marti u ahayd.
Qeybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0, inkastoo ay Roma gool madi ah oo ay la timid qeybtii dambe ee ciyaarta ku martay naadiga Cagliari.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee dheesha Roma ayaa goolka ay guusha ku qaadatay waxaa u dhaliyey 55’daqiiqo Edin Dzeko, waxaana goolkaas caawiye ka ahaa Antonio Ruediger, sidaas ayey Roma oo rayskeeda joogta ay ugu badisay 1-0.
Waxaa xusid mudan in dhammaadkii ciyaarta uu kooxda Cagliari kaarka guduudan ka qaatay Joao Pedro Galvao, kaddib markii uu jilaafay Kevin Strootman.
Guushaas ayaa kooxda Roma u xaqiijisay inay salka la hesho kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Serie A iyadoo leh 47-dhibcood, hal dhibic oo qurana ka dambeysa Juventus oo hoggaanka haysa kulanna baaqi u yahay.
AFCON 2017: Xulka Cameroon oo barbaro la galay Gabon, xilli xulka Burkina Faso uu guul ka gaartay Guinea-Bissau
LA LIGA: Barcelona oo afar gool afka ka galisay kooxda Eibar oo ay booqatay, xilli MSN ay shabaqa soo wada taabteen kulankan… + SAWIRRO